२८ दिन जेल बसेकी रियाको ब्यहवार देखेर वकिल पनि अचम्म ! | TajaKhabarTV
२८ दिन जेल बसेकी रियाको ब्यहवार देखेर वकिल पनि अचम्म !
२०७७, २७ आश्विन मंगलवार १२:३३ October 13, 2020 ताजा खबरमनोरन्जन
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको घटनामा उनको प्रेमिका भनिएकी रिया चर्कवर्ती छानविनका लागि २८ दिन हिरासतमा बसेर छुटेकी छन् । सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको घटनालाई ड्र ग्स कनेक्सनसंग जोडेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
उनी ड्र ग्स मामिलामा हि’रासतमा पुगेकी हुन् । त्यहाँ छँदा उनले निकै सादगी जिवन बिताएकी छन् । उनका वकिल सतिसले उनले हि’रासतमा कसरी दिन बिताइन् भन्ने खुलाएका छन् । कोरोनाका जोखिम भएका कारण हि’रासतमा उनलाई घरको खाना लैजाने अनुमति थिएन । हि’रासतमा जे उपलब्ध छ त्यही उनले पनि खाइन्।
त्यहाँ रहेका अन्य ब्यक्तिसंग घुलमिल हुने गरेको देखेका वकिल पनि रियाको ब्यवहार देखेर अचम्म परे । रिया त्यहाँ पुगेपछि आफुलाई थप बलियो बनाइरहेकी थिइन् । जिवनका बारेमा त्यहाँ रहेका अन्यलाई पनि सिकाउँथिन् । आफु अधिवक्ता भएका कारण दिनहुँ उनलाई भेट्न जानुपर्ने भएकाले उनले यो सब देखिरहेका थिए।
उनले भने, म त्यहाँ गएर उनलाई देखे पछि मनमा एकप्रकारले आनन्द फिल भयो । उनी त्यहाँ रहेका कै दीहरुसँग राम्रोसँग घुलमिल भइरहेकी थिइन् । बलिउड अभिनेत्री नै भएपनि जेल भित्र उनी एक सामान्य महिला थिइन् । कोरोनाको कारणले उनलाई घरबाट खान लगिदिन बञ्चित गरिएको थियो । त्यसैले त्यहाँ जे पाक्छ त्यही खान्थिन् । उनले त्यहाँ रहेका कै’दीबन्दी महिलाहरुलाई जीवनको बारेमा धेरै कुरा सिकाइन् र योग र ध्यानमा बढी समय दिन प्रेरित गरिन्।
रियालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको हो । उनका भाई भने अझै पनि हि’रासतमा छन् । उनलाई अदालतले धेरै सर्त राखेर रिहा गरेको हो । रियाले अदालतमा पासपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ र उनले मुम्बइ बाहिर जानको लागि अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ । सोधपुछका लागि बोलाएको समयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । रियालाई एनसीबीले ८ सेप्टेम्बरमा प’क्राउ गरेको थियो।
२०७८, ७ श्रावण बिहीबार ०८:५३
२०७८, ५ श्रावण मंगलवार १३:५८
प्रियंका कार्की ‘बेबी सावर’को भब्य पार्टी, फोटो देख्दा दुनियाँ चकित ( हेर्नुस फोटो फिचर )
२०७८, ५ श्रावण मंगलवार ०९:५०
प्रियंकाको फोटोले पुन: तात्यो सामाजिक संजाल, फ्यानले भने : ‘नाटक धेरै भयो’